तिथि मेरो पत्रु » चार साधारण सम्बन्ध समस्या
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अक्टोबर. 23 2020 |3मिनेट पढ्न
प्रेम यस्तो अविश्वसनीय कुरा हो! यो हामी एक पाउन प्रयास आधा हाम्रो जीवन खर्च कारण छ. हामी जब तर केवल आधा कथा हो. हामी कुनै पनि सम्बन्ध मा बाटो हाम्रो समस्या बाध्य तर हामीले सामना जो विषयहरूमा यी सबै पनि साधारण समाधान गर्न प्रयास तरिकाहरू छ छन्. तपाईं एक साझेदारी हो र यी समस्या को कुनै तपाईं त सँगै छ भन्दा ठूलो हो भने तपाईं साँच्चै विशेष कुरा छ दिन को अन्त मा कि सम्झना. यो मा पकड लडने. यहाँ मान्छे सम्बन्ध मा सामना र संभवतः तिनीहरूलाई समाधान कसरी चार साधारण समस्या छ.
संचार शायद छ सबै भन्दा साधारण सम्बन्ध समस्या छ. जो छैनन् दुई मान्छे मान्छे को तुलना नै पृष्ठ मा हो जहाँ एक सम्बन्धमा उत्पन्न छैन जो धेरै समस्या छ. सञ्चार बाधा ठूलो र तिनीहरूले साँच्चै भन्दा बढी जटिल रही देखि अवस्थामा रोकन हामीलाई रोक्न. तपाईं र तपाईंको साथी यी बाधा आफ्नो सम्बन्ध मा अवस्थित यस दृष्टिकोण बाटो पाउन भने एक खुला छ, इमानदार र गैर-आलोचक हृदय. यी परिस्थितिमा उकास्न जोडी छ जो आगोको धेरै कथा को आफ्नो पक्ष सुनेर बिना दुई मान्छे र व्यक्ति को फलस्वरूप बनाउने न्याय बीच समझ अभाव आउँछ. तल बस्ने प्रयास र कुरा, भाषण, भाषण.
विभिन्न कुराहरू चाहना
यो यस्तो बाहिर जान जहाँ जस्तै साना कुराहरु चाहे, जहाँ खान, आदि … बाँच्न जहाँ जस्तै या बडा विषयहरूमा, सँगै बस्न वा विवाह वा बच्चाहरु वा विभिन्न कुराहरू चाहने एक ठूलो सम्बन्ध समस्या छ लागि होस् कि. अनि यो एक वा अर्को तरीका मा हुनेछ हामी अझै पनि हाम्रो आफ्नै विचार प्रक्रिया पाएकाहरू र हामी हाम्रो जीवन बदल देख्न कसरी योजना हो हाम्रो जीवन मा विशेष व्यक्ति संग हो जब हामी एक हो तापनि किनभने. यो हामी के चाहन्छौं पखाल्न हामी तिनीहरूलाई देख्न किनभने घर्षण ल्याउँछ र हामी राखिएका भने यो तिनीहरूलाई नमीठो गर्छन. तपाईं फेरि कुरा छ को आवश्यकता तर तपाईं पनि आफूले चाहेको आदर गर्न के आवश्यकता, e.g. विवाह श्रेष्ठ र तिनीहरूले जस्तै कुरा देख्न छैन सँगै बस्न चाहने व्यक्ति जहाँ सँगै बस्नु मात्र उचित छ भन्ने सोचाइ विवाह गर्न चाहने मान्छे को एक धेरै. अर्को शब्दमा, तपाईं विभिन्न कुराहरू चाहनुहुन्छ, छैन “राम्रो” कुरा र आवश्यकता सम्झना गर्न वा अन्यथा मान्छे तपाईं पठाइसकेपछि वा तिनीहरूले सही छ भन्ने बाटो शोषण गरिरहेका छन् महसुस. समझौता यहाँ पनि महत्वपूर्ण छ. तपाईं कुनै पनि सम्बन्ध मा यो आवश्यकता. बस आफ्नो भागमा प्रत्येक मा गरेको सम्झौता एक बराबर राशि छ सुनिश्चित.
उनि भन्छन् मुद्रा सबै दुष्ट को जड छ र सम्बन्ध मा यो बियर राख्छ कि एक विष हुन सक्छ. हामी मंदी समयमा बाँचिरहेका छौं र जब अक्सर उपलब्ध छैनन्. मान्छे संघर्ष गर्दै छन् र यो स्वाभाविक हो जो आफ्नो सम्बन्ध मा एक तनाव राख्न सक्छौं. तपाईं के गर्न आवश्यक प्रत्येक अन्य प्रोत्साहन छ, तपाईं प्रत्येक अन्य विश्वास र सँगै तपाईं अन्य पक्ष बाहिर आउन सक्छ प्रत्येक अन्य देखाउन अन्ततः तपाईं किनभने. तर तपाईं संसारमा सबैभन्दा प्रेम व्यक्ति संग बहस त्यतिन्जेल केही समाधान जा रहेको छ. केहि यो मात्र एक लाख पल्ट बुरा कुराहरु बनाउन भने.
रक्सी लत & अवसाद
यी त्यस्ता despairing ebbs मा आफ्नो साथी हेरिरहेका छन् जब मा के कसैलाई थाहा लागि कठिन मुद्दा हो. जीवन पनि धेरै फरक तरिकामा र केही मान्छे मा सबै को लागि अरू भन्दा असल सामना गर्न सक्छन्. तपाईं के गर्न आवश्यक तिनीहरूलाई लागि त्यहाँ हुन छ, तपाईं को माध्यम तान्न तिनीहरूलाई विश्वास छ र पनि अधिक तल उनि पहिले देखि नै हो भन्दा तिनीहरूलाई बनाउने आफ्नो टाउको को माथि टिप्पणी भन्नुहुन्न देखाउन.